सुटकेसमा ३० करोड बोकेर दुबई फरार हुन लागेकी २० वर्षकी युवती तारा विमानस्थलमा यसरी परिन प्रहरिको फ’न्दामा ! – Sapana Sanjal
April 24, 2021 160
५ वटा सुटकेसमा ठूलो रकम नगद राखेर दुबई उड्न लागेकी एक युवती बेलायतको लण्डनस्थित हिथ्रो वि,मानस्थलमा प,क्राउ परेकी छिन् ।
ती बेलायती युवतीले ५ वटा सुटकेसमा २ मिलियन ब्रिटिस पाउण्ड (३० करोड नेपाली रुपैयाँ) राखेर लण्डनको हिथ्रो वि,मानस्थलबाट दुबइ उड्ने प्रयास गरेकी थिइन् । २० वर्षकी तारा हान्लोनलाई हिथ्रोमा बोर्डर फोर्सका अधिकारीहरुले प’क्राउ गरेको द सनको समाचारमा जनाइएको छ ।
सुरक्षाकर्मीले उनका लगेजभित्र ठूलो परिमाणमा नगद फेला पारेका छन् । यो यस वर्ष यसरी प,क्राउ गरिएको सबेभन्दा ठूलो रकम हो । हान्लोनलाई मनी लण्ड्रिङको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको छ ।
उनलाई अक्सब्रिज मजिस्ट्रेटको अगाडि उपस्थित गराएर अनुसन्धानको लागि म्याद थपिएको छ । अदालतले उनलाई नोभेम्बर ५ सम्मको लागि पुलिस हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।
यो पनिपढ़नु होस: चार रुपैयाँमा चिउरा तरकारी !
तनहुँकाे व्यास नगरपालिका–१२ भड्खालामा रहेकाे मत्स्यकन्या आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत शिक्षक तथा विद्यार्थीले दिउँसोको खाजा चार रुपैयाँमा नै खाँदै आएका छन् ।
‘हम हाउस’ नामक एक जापानिज संस्थाले विद्यालयमा खाजा व्यवस्थापनका लागि मासिक २५ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्दै आएको छ । दुई सय विद्यार्थी र १० शिक्षक शिक्षिकाले दैनिक खाजा खाँदा एक जनाको भागमा दैनिक चार रुपैयाँ पर्ने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक ललित पाण्डेले बताउनुभयो ।
यस संस्थाले गएकाे भदौदेखि विद्यालयलाई सहयोग गर्दै आएपछि खाजाका लागि सहज भएको छ । प्रधानाध्यापक पाण्डेले भन्नुभयो, ‘खाजा पकाउने भाडावर्तनदेखि खाने प्लेट, चम्चा, गिलासलगायतका सामग्री सहयोग भएको छ ।
’ बढी भएका खानेकुरा फ्याँक्नु नपरोस् भन्ने सोचका यस संस्थाले साथ एक थान फ्रिजसमेत उपलब्ध गराएको छ ।
विद्यार्थीलाई संस्कृति सिकाइँदै
व्यास नगरपालिका–१ निर्मल माध्यमिक विद्यालयले नेपाली पम्परागत कला, सीप र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विद्यार्थीलाई व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गर्न थालेको छ । यस विद्यालयले विद्यार्थीलाई गुन्द्री बुन्ने, दही मोथ्ने, जाँतो चलाउने, ढिकी कुट्ने, मकै भुट्ने र हलो जोत्नेलगायतका सीप सिकाउन थालेको हो ।
विषयगत शिक्षाका अलवा विद्यालयमा व्यावहारिक ज्ञान सिकाएर नयाँ पुस्तालाई पुरानो सीप र संस्कृतिबारे नौलो ढङ्गले प्रयोगात्मक शिक्षा प्रदान गरिएको शिक्षक लोकराज सेढाईंले बताउनुभयो ।
संस्कृति र परम्परा लोप हुँदै जान थालेको अवस्थामा त्यसको संरक्षणका लागि विद्यार्थीलाई यस्ता सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारको नमुना विद्यालयका रुपमा निर्मल माविले इन्टरनेशनल स्कुल अर्वाडसमेत प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।
अवार्ड प्राप्त कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालयले अतिरिक्त क्रियाकलापअन्तर्गत संस्कृति संरक्षण तालिम प्रदान गरिएको कार्यक्रमका संयोजक तथा विद्यालयका शिक्षक महेन्द्र न्यौपानेले बताउनुभयो ।
ब्रिटिस काउन्सिल लाइबेरीले विश्वभर सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा यो विद्यालय पनि छनोटमा परेकाले विभिन्न सात आयोजनाको काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रममा निर्धारित विषयका अलवा ग्रामिण जीवनको मूल आधारका रुपमा रहेका सीप सिकाएर नेपाल र नेपालीपन चिनाउने सुनौलो अवसरका रुपमा पनि लिइएको विद्यालयका प्राधानाध्यापक गणेशचन्द्र बस्नेत बताउनुभयो । विद्यालयले विगत दुई वर्षअघि सालको पातको टपरी बनाउने तालिम विद्यार्थीलाई प्रदान गरिएको र बाँसको डोको बुन्ने,
Prevसुटकेसमा ३० करोड बोकेर दुबई फरार हुन लागेकी २० वर्षकी युवती तारा विमानस्थलमा यसरी परिन प्रहरिको फ’न्दामा !
Nextदुर्घटनामा आमाबुवा घाइते ८ वर्षका छोराको मृत्यु
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, असार २६ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
१६ वर्ष पहिले हराएको हिराको औंठी गाजरले लगाएको भेटिए’पछि…
भोलि देखि लगातार ३ दिन भारि वर्षा हुने